Viking Sky cruise ngarava yakachengetedzwa zvakachengeteka kuchiteshi cheNorway, vatakurwi mazana matanhatu nematanhatu vanunurwa, makumi maviri vari muchipatara
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwekuchengetedza & Dambudziko » Viking Sky cruise ngarava yakachengetedzwa zvakachengeteka kuchiteshi cheNorway, vatakurwi mazana matanhatu nematanhatu vanunurwa, makumi maviri vari muchipatara
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Kurwisa • nhau • Norway Kuputsa Nhau • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Ngarava yepamusoro yeViking Sun yakasiiwa ichiyangarara nekuda kwekutadza kweinjini uye yakapotsa yarova mumatombo mumvura ine hukasha yasvika zvakanaka pachiteshi cheMolde kumadokero kwemahombekombe kuNorway, nevanhu vanopfuura 900 vari muchikepe.
Denga reViking rakakweverwa kwakachengeteka nematangi maviri, imwe ichifamba pamberi pechikepe uye imwe kumashure kwayo.
Ngarava yemhando yepamusoro, iyo yakafamba nevapfuuri vanosvika chiuru nemazana mana nevashandi, yakatumira chiratidzo cheSOS neMugovera. Yakanga ichikukurwa mumvura isina kusimba padyo negungwa rine matombo mushure mekunge injini dzayo dzese dzamira kushanda.
Pane imwe nguva, yakasvika pasirese chinhambwe chemamita zana chete, nevatakuri vachitumira mifananidzo inoshamisa. Asi vashandi vakazokwanisa kutanga imwe yeinjini uye kudzivirira tsaona.
"Dai vanga vakamhanyira pasi tingadai takatarisana nedambudziko guru," Hans Vik, vatungamiriri veJoint Rescue Coordination Center yekumaodzanyemba kweNorway, vakaudza TV2.
Kununura masevhisi akaendesa nendege vafambi 479 kuenda kuherikoputa mamiriro ekunze asati avandudzika uye Viking Sky inogona kudhonzwa.
Vanhu makumi maviri vaida kuiswa muchipatara nekuda kwekuraira, mashandiro engarava akadaro. Vafambi vacho vaive vagari vechikuru vanobva kuUS nekuBritain.